Nhau - Yakachengeteka kugadzirwa kwemaitiro ePVC masuo nemahwindo
Yakachengeteka kugadzirwa kwemaitiro ePVC masuo nemahwindo
1.Dhoo uye hwindo maitiro ekudhirowa
Chekutanga pane zvese, ndapota nyatso tarisa maitiro edhirowa, sarudza mhando uye huwandu hwemawindo anodikanwa zvinoenderana nezvinodiwa dhizaini, uye mhedziso
Yakagadziridzwa uye yakagadzika-kureba, uye inoitwa zvinoenderana nemhando dzakasiyana uye dzakasiyana mhando dzemahwindo ekuvandudza mwero wekushandisa uye chiyero chekugadzira.
2. Nzira yekuchengetedza
Vashandi vanofanirwa kupfeka zvakatsvinda, kupfeka zvigadzirwa zveinishuwarenzi yevashandi zvinoenderana nezvinodiwa pabasa, uye kutarisisa pakudzivirira tsaona dzine njodzi. Pyrotechnics inorambidzwa mumusangano uye vese vashandi vanorambidzwa kuputa.
3. Mbiri yekucheka, yekugaya maburi ekudonha, makomba makiyi
A.Iyo hombe mbiri yekuvhara mabhegi kazhinji inoshandisa miviri miter yakaona kuvhara. Siya 2.5mm ~ 3mm kumagumo ega ega echinhu semuganho, uye pasi pechisimbi. Iko kushivirira kwezvinhu kunofanirwa kudzorwa mukati me1mm, uye kushivirira kwekona kunofanira kudzorwa mukati me0,5 degrees.
B.Iyo furemu ficha inofanirwa kuyerwa nemakomba ekudhirina, uye iyo fan fan inofanira kazhinji kukwiridzwa nemaburi ekudonha uye mabudiro emhepo ekuenzanisa maburi. Iyo dhayamita yemugodhi wekudonha inodiwa kuti ive 5mm, kureba 30mm, iyo gomba rekudonha harifanirwe kuiswa mune iyo mhango nesimbi lining, uye haigoni kupinda mukati mevhu nesimbi lining.
C. Kana iwe uchida kuisa iyo actuator uye iro gonhi kukiya, iwe unofanirwa kuboora kiyi gomba
4. Gungano resimbi yakasimbiswa
Kana saizi yemusuwo uye hwindo dhizaini yakakura kudarika kana yakaenzana nehurefu hwakatarwa, mhango yemukati inofanira kunge iri yesimbi. Uye zvakare, iyo Hardware gungano Lining yesimbi inofanira kuwedzerwa kune majoini emasuo akabatanidzwa nemahwindo uye majoini emasuo akabatanidzwa nemahwindo. Uye gadzirisa. Chikamu chesimbi pachikamu chinotakura kushushikana kwechikamu chakaumbwa-chakaita seT uye chinofanira kunge chiri apo ndiro yakasungirirwa ichingosimudzwa mushure mekunge chikamu chanyungudika. Pinza simbi yebute pakutanga uye uigadzirise mushure mekusimbisa.
Zvinosunga zvesimbi lining hazvifanirwe kunge zviri pasi pe3, nzvimbo yacho haizove inopfuura 300mm, uye chinhambwe kubva kumagumo echikamu chesimbi hachive chakakura kupfuura 100mm. Panofanira kunge pasiri pasi pemakomba matatu-akasendamira-ega (ekugadzirisa zvidimbu) zvehwindo rese, nzvimbo yacho haifanirwe kunge iri pamusoro pe500mm, uye chinhambwe kubva kumagumo kwehwindo hachifanirwe kunge chakanyanya kukura. Pa150mm. Iyo T-yakaumbwa kubatana inoda kuve neinosimudza maburi pa150mm pamativi ese maviri epakati rutsigiro
Paunenge uchicheka, teerera kune tembiricha yemoto 240-250 ° C, iyo yekumanikidza yekumanikidza 0.3-0.35MPA, iyo yekumanikidza kumanikidza 0.4-0.6MPA, nguva inonyungudika 20-30 masekondi, kutonhora nguva 25-30 masekondi. Welding shiviriro inofanirwa kudzorwa mukati me2mm Mukati
6. Bvisa makona, isa mabara erabha
A. Kuchenesa kweAngle kwakakamurwa kuita kwekuchenesa kwemaoko uye kwekuchenesa kwemuchina. Mushure mekudonha, iyo angle inogona kucheneswa mushure memaminitsi makumi matatu ekutonhora.
B. Furemu, fan uye girazi bead, isa akasiyana marudzi erabha tambo yepamusoro maererano nezvinodiwa. Chimiro, feni yerabha strip yakatwasuka chikamu;
Kureba kwetambo yerabha kunofanirwa kuve ingangoita 1% kureba kudzivirira iyo tambo yerabha kuti isadzike. Kwete kusunungura, kugunun'una, kana wepakati mushure mekumisikidzwa kwereabha pamusoro
7. Hardware gungano
Iwo akapera epurasitiki-simbi mikova nemahwindo akaunganidzwa kubva mufuremu uye fan kuburikidza ne Hardware. Nheyo yegungano remagetsi ndeiyi: Simba rakaringana, chinzvimbo chakaringana, kusangana nemabasa akasiyana uye nyore kutsiva, Hardware inofanirwa kugadziriswa mune yakaisirwa yakakwidziridzwa mhando Pane iyo lining simbi, iyo Hardware yekumisa screws inofanira kuiswa izere, uye iyo yekumisikidza chinzvimbo yeiyo Hardware inofanirwa kuve yakanyatsoenderana neyakajairwa.
8. Kuiswa kwegirazi
Muchikamu icho girazi rinofanira kuiswa, isa girazi chivharo kutanga, isa girazi rakachekwa pabhokisi, wobva wapfuudza girazi Girazi regirazi rinosunga girazi rakasimba.
9.Kapedza chigadzirwa kurongedza uye kuongorora kwehunhu
Mikova nemahwindo zvisati zvagadzirwa nekusiya fekitori, zvinoda kuiswa mumapepa kudzivirira kusvibiswa. Pasi pechirevo chekumisikidzwa kwenzwi, kurongedza-kudivi rimwe chete. Iyo tepi-yakatenderedzwa yekurongedza tepi ichave isingave isingasviki matatu mapoinzi uye nzvimbo yacho haizove iri pamusoro pe600 mm. Mushure mekurongedza, mucherechedzo saizi rehwindo munzvimbo ine mukurumbira. Mushure mekunge madhoo epurasitiki nemahwindo aunganidzwa, kuongororwa kwakasimba kwehunhu kunodiwa.
A.Chitarisiko kuongorora: Kumeso kwemikova nemahwindo kunofanirwa kuve kwakatsetseka, pasina mabhuru uye kutsemuka, yunifomu muvara, uye ma welds anofanirwa kuve akatsetseka, uye hapafanirwe kuve nemavanga ari pachena. Kukanganisa kwakadai sekusachena;
B. Chitarisiko saizi kuongorora
C. Iyo yekuisa micheka mitsetse yakafananidzwa yakashongedzwa nemusoro, majoini akasimba, uye hapana grooving chiitiko;
D.Iyo yekuvharira tambo inofanirwa kuunganidzwa zvine mutsindo, uye mukaha uri pakati pemakona nemajusi majoini haufanire kuve wakakura kudarika 1mm, uye havafanirwe kunge vari kudivi rimwe. Shandisa zvidimbu zviviri kana kupfuura zvekunamatira;
E. Iyo Hardware accessories inoiswa munzvimbo chaiyo, izere muhuwandu, uye yakaiswa zvine mutsindo.
Post nguva: Aug-23-2021